Sida loo adeegsado App IO lacagaha, soo celinta iyo isgaarsiinta 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Haddii aan fiiro gaar ah u yeelaneyno hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ee uu bilaabay dowladda Talyaaniga waxaan xaqiiqdii maqalnay barnaamijka cusub ee IO, oo ay abuurtay PagoPA oo si xor ah loogu rakibi karo taleefan kasta oo casriga ah oo ay isticmaali karaan dhammaan muwaadiniinta Talyaaniga. Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa isla markiiba waxay isku arkeen inay dhibaato ku jiraan iyagoo adeegsanaya barnaamijka IO maadaama ay hadda uun ku soo dejiyeen barnaamijka aaladda la qaadan karo iyagoon ogeyn sida loo isticmaalo, waxa loogu talagalay, ama xitaa sida loo galo, taas oo u muuqan karta isla markiiba. macquul maaha haddii aynaan waligeen maqal SPID iyo aqoonsi dijitaal ah (nasiib daro waa muhiim in la isticmaalo barnaamijka IO).
Tilmaamahan waxaan ku tusi doonaa sida loogu isticmaalo arjiga IO lacagaha, soo celinta iyo isgaarsiinta dowladda, si aad u awoodo inaad si dhakhso ah wax uga bixiso bakhaarada isla markaana aad uga faa'iideysato dadaallada la xiriira xakamaynta kharashka iyo abaalmarinta loo qoondeeyay kuwa kharash gareeya qaarkood.
Sida loo isticmaalo barnaamijka IO
Codsiga IO waa fududahay in la isticmaalo, laakiin si looga faa'iidaysto kartidiisa buuxda marka hore waa inaan helnaa SPID, ka dibna sii wad soo dejinta oo gal barnaamijka. Cutubyada soo socda waxaan sidoo kale ku tusi doonaa sida loo daro kaarka amaahda ama kaarka horay loo siiyay iyo sida loo helo ogeysiisyada ku saabsan isgaarsiinta maamulka dadweynaha.
Dhaqaaq SPID oo soo dejiso barnaamijka IO
Kahor isticmaalka barnaamijka IO waa inaan abuurno SPID, taas oo ah aqoonsiga dhijitaalka ah ee uu si toos ah u caddeeyay Dawladda Talyaanigu. Kaadhkan aqoonsiga gaarka ah waxaa laga heli karaa bixiyeyaal badan, oo si bilaash ah ku bixiya (sidaa darteed wax lacag ah kuma bixin doonno). Waqtigan xaadirka ah bixiyeyaasha ugu fiican ee dhaqaajinaya SPID si dhakhso leh Aniga:
PosteID SPID way shaqeysay
SPID leh Aqoonsiga Namirial
Aqoonsiga SPID Aruba
Mid kastoo aad dooratid, si fudud u buuxi xogta loo baahan yahay, dooro habka xaqiijinta ee sida ugu fiican noogu habboon (tusaale ahaan, Poste Italiane sidoo kale way fiicantahay inaad tagto xafiiska boostada) oo markaa aad hesho aqoonsiyada SPID, si loo isticmaalo mar dambe codsiga IO. Haddii aan rabno inaan ogaano sida loo dhaqaajinayo SPID talaabo talaabo ah, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso hagayaasheena Sida loo codsado loona helo SPID mi Sida loo dhaqaajiyo SPID: hage dhammaystiran.
Kadib markaan helno SPID waan awoodnaa soo dejiso barnaamijka 'IO' ee bilaashka ah ee loogu talagalay Android iyo iPhone si toos ah uga socota Google Play Store iyo Apple App Store.
Ku dar deyn, ka hor ama kaarka debit
Marka dalabka lagu daro qalabkeena gacanta, fur, riix batoonka Soo gal SPID oo waxaan doorannaa bixiyaha SPID ee aan ku abuureyno aqoonsiga dijital ah.
Waxaan galnaa lambarka aqoonsiga, xaqiijineynaa xogta laga helay SPID ka dibna aqbalno shuruudaha isticmaalka arjiga. Shaashadda soo socota waxaan doorannaa lambar 6-lambar oo xannibista ah, waxaan doorannaa inaan dhaqaajino aqoonsiga biometric-ka waxaanna xaqiijinaynaa cinwaanka emaylka (oo horeyba looga helay SPID).
Markaad gasho shaashadda gaarka ah ee arjiga waxaan ku dari karnaa kaarka amaahda, kaarka lacag bixinta (sida Postepay) ama kaarka ATM adoo riixaya qeybta hoose ee menu-ka Wallet, adigoo riixaya midigta kore ee curiyaha ku darxulashada maqaalka Qaabka mushaar-bixinta iyo kala doorashada Deynta, kaarka ama kaarka lacag-bixinta, BancoPosta ama kaarka Postepay mi Kaarka Bixinta BAMCOMAT. Waxaan ku dooranay xulashada nooca kaarka aan haysanno, ka dib waxaan galnaa lambarka kaarka, taariikhda uu dhacayo iyo nambarka kaarka ee kaarka (CVV2, badanaa dhabarka). Dhamaadka waxaan gujinaynaa Sii wad si loo xaqiijiyo ku darista kaarka arjiga IO.
Ka dib markii lagu daro habka lacag bixinta saxda ah ee codsiga IO, waxaan galnaa liiska adeegyada hoos si aad u ogaato astaamaha kale ee faa'iidada leh ee barnaamijka: bixi cashuurta baabuurta, dooro meesha aad ku bixinayso foojarka fasaxa, hesho digniino ku saabsan waqtiga kama dambeysta ah ee IMU iyo canshuuraha TASI, hesho ogeysiis ku saabsan dhicitaanka ee DALKA (canshuurta qashinka), bixiso khidmadaha iskuulka iyo dhaqaaji soo celinta.
Haddii degmadeennu ka mid tahay kuwa la sheegay (waxaan sidoo kale gacanta ku dari karnaa degmada oo aan aragnaa haddii ay ku dhexjirto adeegyada PagoPA) waxaan awoodi doonnaa inaan ku bixino ku dhowaad dhammaan canshuuraha khadka tooska ah, innagoo adeegsaneyna mid ka mid ah hababka lacag bixinta la taageeray. Ma daneyneynaa lacag celinta gobolka? Xaaladdan oo kale waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso hageheena Sida loo kiciyo Cashback State: kaararka, xaaladaha iyo xadka.
Sida looga helo isgaarsiinta maamulka dadweynaha
Kaarka ka sokow, ma waxaan dooneynaa inaan u adeegsanno codsiga IO si aan uga helno isgaarsiinta maamulka dadweynaha? Xaaladdan oo kale, waa ku filan tahay in lagu sii hayo barnaamijka taleefanka, maaddaama xiriir kasta oo cusub ogeysiis loo diro shaashadda (haddii ogeysiisyada aysan muuqan, hubi goobaha badbaadinta awoodda, gaar ahaan Android). Si aanan u seegin ogeysiis, waxaan sidoo kale u gudbin karnaa farriimaha ka imanaya barnaamijka IO cinwaanka emaylkeenna: si tan loo sameeyo, si fudud u furo barnaamijka IO taleefankaaga casriga ah, ku gal lambarkaaga PIN ama helitaanka jismiyeed, hoos u riix liiska Perfil, xulo liiska U gudbinta farriimaha emaylka ugu dambayntiina ku cadaadi curiye U sahlo dhammaan adeegyada. Haddii aan dooneyno inaan gacanta ku xusho adeegyada aan ka helno farriimaha ku jira sanduuqa emaylka, waxaan dooraneynaa sheyga Dooro adeegga adeegga oo tilmaamno nooca farriimaha aan dooneyno inaan helno.
Haddii aan sii wadno inaan dhibaatooyin ku qabno ogeysiisyada barnaamijka IO, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso hagayaashayaga Haddii ogeysiisyada la daahiyo, dami hagaajinta batteriga Android mi Ku hagaaji ogeysiisyada Android shaashadda qufulka.
Codsiga IO waxay u badan tahay inuu ugufiican yahay heerka IT-ga ee uu abuuray Dowlada Talyaanigu: Xaqiiqdii, codsigu waa fududahay in la isticmaalo, wuxuu sifiican ugu dhexjiraa dhamaan adeegyada SPID, waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho lacagta laguu soo celiyo ee gobolka, dhaqaajiso adeegyada ogeysiinta canshuuraha iyo canshuuraha iyo noocyada kale ee wada xiriirka hay'adaha, iyadoon loo baahnayn inay la xiriiraan cinwaanka PEC (taas oo, si kastaba ha noqotee, lagu talinayaa inay ka jawaabto farriimaha la helay).
Haddii aan dooneyno inaan abuurno emayl la caddeeyay si aan uga jawaabno emaylka hay'adaha, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso maqaalkeenna. Sida loo helo cinwaanka emaylka PEC (warqad la xaqiijiyay).
Haddii, liddi ku ah, aan raadineyno kaar lacag bixin oo wanaagsan oo lagu daro codsiga IO, waan aqrin karnaa fikradaheena. Kaadhadhka deynta ah ee bilaashka ah ee bilaashka ah mi Kaararka lacag bixinta ugu fiican ee laga iibsado khadka tooska ah iyada oo aan khatar la gelin.